Izindaba - Indima yokupakisha kwensimbi
1. Ukupakisha kwensimbi kuyaqashelwa ngabathengi ngokusebenziseka kwayo nokuguquguquka kwayo. Ukupakisha kwensimbi kungabonakala yonke indawo empilweni yanamuhla yansuku zonke. Ukuthuthuka kwayo okusimeme kanye nezici ezivelele ezibalwe ngezansi kuyenza isixazululo esifanelekile sokupakisha ngekhulu lama-21:
Izinzuzo zokupakisha zensimbi:
* Vikela umkhiqizo isikhathi eside; esimweni esivaliwe, ukudla kungagcinwa ngokuphelele kusukela ngesikhathi kuvalwa.
* Vimbela umkhiqizo imfucuza
* Gcina izakhi zomzimba ezihlanganisiwe; nweba impilo yeshalofu yemikhiqizo ehlanganisiwe
* Qinisekisa ukuvikelwa ekukhanyeni, oksijini nakwigciwane
* Umkhiqizo uhlala umusha kuze kuvulwe ithini; ukufakwa kwensimbi ngempilo yeshalofu enwetshiwe kungavimbela ukukhanya, umoya-mpilo namagciwane; ikani lingaqinisekisa ukuthi umkhiqizo uhlala uhlanzekile.
* Izinsimbi ziyaqhubeka nokuba namandla amakhulu okuthuthuka kanye nokwenza izinto ezintsha. Ububanzi bezinhlelo zokusebenza abunamkhawulo, kusukela ekupakisheni amaswidi anisela umlomo, amavidiyo angenayo i-microwaveable kuya kuma-aerosols nokuningi. Ukupakisha kwensimbi kuhlala kuthuthuka futhi kuyathuthuka ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende nabathengi.
Namuhla, insimbi isetshenzisiwe emikhiqizweni ehlukahlukene nasezixazululweni zokupakisha, kepha abaklami bayaqhubeka nokufuna amathuba amasha okuheha abathengi. Amabhokisi ensimbi anezinhlobonhlobo zezimo, amasayizi nemihlobiso, engasetshenziselwa:
Ukudla, iziphuzo, izimpahla zikanokusho, imikhiqizo yomuntu uqobo, izidingo zasendlini zansuku zonke.
Ukusebenziseka kalula kuseyiyona nto ehamba phambili ekuthuthukiseni ukupakishwa kwezimpahla ezihlanganisiwe zabathengi. Izinguquko esakhiweni somndeni, amahora okusebenza aguquguqukayo nesikhathi sokuhamba kuholele kuzinguquko emikhubeni yokusebenzisa. Imindeni yokupakisha iya ngokuya incipha, izindlela zokuphila ziya ngokuxakeka, futhi imboni yokupakisha ihlala iguquka ukuhlangabezana nalezi zidingo eziguqukayo njalo.
Ukupakisha kwensimbi kunokuqina okuphezulu, okuthuthukisa ukuphepha komkhiqizo. Izici zalo zokuvimba zingagcina ikhwalithi enhle nokungena kokungcola, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ukuthi okuqukethwe kufinyelela kubathengi ngokuphepha ngaphandle kokungcoliswa.
Ukupakisha kwensimbi kuhlangabezana nezidingo ezintsha zabathengi ngokusebenzisa ukupakisha okulula ukuvula, ukuphinda kutholakale futhi izingxenye ezilawulwayo ezivumela abathengi ukuthi bavule kuphela abakudingayo. Umklamo wensimbi ongasetshenziswa kuhhavini we-microwave unweba lula ukupakisha kwensimbi kokudla okulula.
Ukudla okusemathinini kungadliwa ngokuphepha iminyaka eminingi futhi kufanelekile ekudleni namuhla noma ezimeni eziphuthumayo kusasa. Ithangi alidingi ukufakwa esiqandisini noma eqandeni. Banikela ngokuvikelwa okuphelele ekukhanyeni naku-oxygen, futhi bavaliwe. Futhi zingavikela ukudla ukuvimbela izakhamzimba zingangeni ngaphakathi. Umkhiqizo uphinde uvikeleke kumswakama, uthuli, amagundane nokunye ukungcola.
3. Ukupakisha kuyinto enhle kakhulu
Ukwenza ubuchwepheshe be-embossing kanye ne-embossing kwenza abakhiqizi bakwazi ukukhiqiza imiklamo emisha yamakhono. Ukubhalwa nge-embossing kuyindlela ekhiqiza imihlobiso noma ama-reliefs ngemigqa ephakanyisiwe (kusuka ngaphakathi kuye ngaphandle), kuyilapho ama-de-protrusions ekhiqiza imihlobiso enemiqobelo ye-concave (kusuka ngaphakathi kuye ngaphandle). Inzuzo yezingxenye ze-convex ne-concave ukuthi ubukhulu bangaphandle obukhona bungagcinwa, ngakho-ke asikho isidingo sokushintsha indawo yokuhamba nepallet. Insimbi yangaphambilini ibhaliswe ngemidwebo ephrintiwe ukukhulisa imiphumela yokubuka neyokuthinta. Izithombe nemidwebo, i-brand LOGO, isexwayiso esithintekayo nemisebenzi yokuqashelwa komkhiqizo konke kungathuthukiswa.
4. Ukwenza kabusha
Kulezi zinsuku, umqondo wokuvikelwa kwemvelo ugxile kakhulu ezinhliziyweni zabantu, futhi ukufakwa kwensimbi okungabuye kusetshenziswe kabusha kuyathandwa ngabathengi; ukufakwa kwensimbi kungaphinda kusetshenziswe kabusha i-100% unomphela ngaphandle kokulahlekelwa izici zayo zemvelo. Kuyinsiza etholakala unomphela, esetshenziswa kabusha emhlabeni wonke, futhi ingenye yezinto zokupakisha ezinenani eliphakeme kakhulu lokusebenzisa kabusha. Insimbi ne-aluminium kuphakathi kwezinsizakusebenza eziningi emhlabeni, yize izinto ezenziwe kabusha zanciphisa kakhulu umthelela wokucutshungulwa kwemvelo.
Phakathi kwazo zonke izinto ezinkulu ezincintisanayo zokupakisha, insimbi inezinga eliphakeme kakhulu lokutakula kanye nezinga lokutakula, futhi ibilokhu inyuka unyaka nonyaka: - Ngo-2019, izinga lokutholwa kwamakani wensimbi namathini okuphuza i-aluminium kwakungu-80% no-75% ngokulandelana; ukuphinda kusetshenziswe kabusha ukusetshenziswa kwamandla okuncishisiwe futhi kukhishwa inani elikhulu lesikhutha.
Ibhasikidi Yesitoreji Sensimbi EsineLid, Ibhokisi leTin, Ukupakisha kweTin Box, Ikesi Lesitoreji se-Cd, I-Ring Pull Can Opener Uzipho, Ngokwezifiso Tin Ibhokisi,